Lalàna sy fahasoavana - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse manerantany
haino aman-jery > Journal succession > 2015-03 mpandimby ny Magazine > Lalàna sy fahasoavana
Rehefa nihaino ny hiran'i "State of Mind New York" an'i Billy Joel aho herinandro vitsy lasa izay raha nijery ny vaovaom-baovao an-tserasera aho dia nilatsaka teo amin'ny lahatsoratra manaraka ny masoko. Manazava izany fa ny fanjakan'i New York dia vao namoaka lalàna izay mandrara ny fanaovana tatoazy sy ny fanindrona ny biby fiompy. Mampientanentana ahy ny mahafantatra fa ilaina ny lalàna toa an'io. Toa zary lasa fironana ity fomba fanao ity. Mino aho fa maro ny New York no nanamarika ny fahitana ity lalàna ity satria iray dia maro amin'ireo olona vao haingana no nanangana izany fanjakana izany. Ny fanjakàn'ny natiora dia manana eritreritra ara-dalàna amin'ny ambaratonga rehetra. Tsy isalasalana fa manaiky ny fandrarana sy ny didy vaovao maro izy ireo. Fa ny ankamaroany dia manandrana manao an'ity tontolo ity ho toerana tsara kokoa. Ilaina ny lalàna indraindray indraindray satria tsy mitovy saina ny olona. Na izany aza, ny tatitry ny fampahalalam-baovao CNN dia nitatitra fa 201440.000 ny lalàna vaovao nanjaka tany Etazonia tamin'ny taona .
Nahoana no maro ny lalàna?
Indrindra indrindra fa isika olombelona, ​​izay manana fironana hanota, dia miezaka mitady banga amin'ny fitsipika misy. Vokany, mila lalàna bebe kokoa. Vitsy no takina raha toa ka afaka nanao ny olona ho lavorary ny lalàna. Tsy izany anefa no izy. Ny tanjon'ny lalàna dia ny hitazonana ny olona tsy lavorary ary hampiroborobo ny filaminana sy ny firindrana ara-tsosialy. Tao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonana tany Roma, i Paoly dia nanoratra tao amin’ny Romana 8,3 momba ny fetran’ny lalàna nomen’Andriamanitra ny Isiraely tamin’ny alalan’i Mosesy, ireto manaraka ireto (Romana 8,3 GN). «Tsy afaka mitondra ny ain’olombelona ho antsika ny lalàna satria tsy nanohitra ny toetrantsika feno fitiavan-tena. Noho izany, Andriamanitra dia naniraka ny Zanany tamin’ny endriny ara-batana, izay olona tia tena sy nandevozin’ny ota, ary namela azy ho faty ho sorona noho ny ota. Noho izany dia nanao ny fizotry ny ota araka izay tena nampivelatra ny heriny izy: tao amin’ny maha-olombelona.
Tsy nahatakatra ny fetran’ny lalàna ny mpitondra fivavahana teo amin’ny Israely, ka nanampy an’ilay Lalàn’i Mosesy. Nisy ihany koa ny fotoana izay saika tsy azo natao ny nanara-maso ireo lalàna ireo, mainka fa ny fankatoavana azy ireo. Na firy na firy ny lalàna natao dia tsy tanteraka mihitsy (ary tsy ho tanteraka mihitsy) ny fitandremana ny lalàna. Ary izany indrindra no nampanahy an’i Paoly. Tsy nomen’Andriamanitra ny lalàna hahatanteraka ny olony (marina sy masina). Andriamanitra irery ihany no manao ny olona ho tonga lafatra sy marina ary masina - amin’ny alalan’ny fahasoavana. Mifanohitra amin'ny lalàna sy ny fahasoavana, ny sasany dia miampanga ahy ho mankahala ny lalàn'Andriamanitra sy mampiroborobo ny antinomisme. (Ny antinomisma dia finoana fa amin’ny alalan’ny fahasoavana no hanavotana ny olona amin’ny adidy hankatò ny lalàna ara-moraly). Saingy tsy misy lavitra ny fahamarinana. Tahaka ny olon-drehetra, maniry aho fa hankatò tsara kokoa ny lalàna ny olona. Iza no haniry ny hisian'ny fandikan-dalàna? Kanefa, araka ny nampahatsiahivin’i Paoly antsika, dia tena ilaina ny mahatakatra izay azon’ny lalàna atao sy tsy azo atao, noho ny famindram-pony, Andriamanitra dia nanome ny Isiraely ny lalàna, anisan’izany ny Didy Folo, mba hitarihana azy ireo amin’ny lalana tsara kokoa. Izany no nilazan’i Paoly ao amin’ny Romana 7,12 (FIAINAKO FIAINANA VAOVAO): "Fa ny lalàna dia masina, ary ny didy dia masina sy marina ary tsara." Saingy amin'ny toetrany manokana, voafetra ny lalàna. Tsy afaka mitondra famonjena na manafaka olona amin'ny fanamelohana sy fanamelohana izany. Tsy afaka manamarina na mampihavana antsika ny lalàna, avelao hanamasina sy hanome voninahitra antsika.
Ny fahasoavan’Andriamanitra irery ihany no afaka manao izany amin’ny alalan’ny asa fanavotana nataon’i Jesosy sy ny Fanahy Masina ao anatintsika. Tahaka an’i Paoly ao amin’ny Galatianina 2,21 nanoratra [GN] hoe: “Tsy mandà ny fahasoavan’Andriamanitra aho. Raha afaka mijoro eo anatrehan’Andriamanitra amin’ny fanatanterahana ny lalàna isika, dia ho maty foana Kristy ».
Amin'izany lafiny izany, nitory ireo gadra tao amin'ny fonjan'i Soisa ihany koa i Karl Barth:
"Ka andao hihaino izay lazain'ny Baiboly sy izay ambara antsika kristianina ho henoina: Nodimbinin'ny fahasoavana ianareo. Tsy misy afaka milaza izany aminy ho azy. Tsy afaka miteny amin'ny olon-kafa koa izy. Andriamanitra irery ihany no afaka milaza amintsika tsirairay avy. Ilaina i Jesosy Kristy mba hahatanteraka izay voalaza. Mitaky ny hampitaovana azy ireo ny apostoly. Ary mila mivory eto isika raha ny Kristianina no manaparitaka azy ireo eto amintsika. Izay no mahatonga ny vaovao tsy marina ary hafatra tena miavaka, ny vaovao mahafaly indrindra avy amin'ny rehetra, ary koa ny tena mahasoa - tokoa tokoa ilay hany manampy. »
Rehefa mandre ny vaovao mahafaly, ny filazantsara dia misy olona matahotra fa tsy hiasa akory ny fahasoavan'Andriamanitra. Miompana manokana ny mpanao lalàna fa ny olona dia hanome ny fahasoavana ho lentaent. Tsy azonao ny fahamarinana nambaran'i Jesosy fa ny fiainantsika dia misy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny alàlan'ny fanompoana miaraka aminy, ny toerany amin'ny maha-mpamorona sy mpanavotra azy dia tsy tokony hanontaniana akory izany.
Ny anjara asantsika dia ny miaina sy mizara ny vaovao mahafaly, ny mitory ny fitiavan'Andriamanitra, ary ho ohatra amin'ny fankasitrahana noho ny fanambaran'ny tena manokana sy ny fidiran'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Karl Barth dia nanoratra ao amin'ny "Church Dogmatics" fa io fankatoavana an'Andriamanitra io dia manomboka amin'ny endrika fankasitrahana: "Ny fahasoavana dia miteraka fankasitrahana, toy ny feo iray mamoaka feo." Manaraka fahasoavana toy ny varatra ny tselatra ny fankasitrahana.
Naneho hevitra fanampiny i Barth:
«Rehefa tia an Andriamanitra dia mampiseho ny ao anaty ao anaty izy fa hoe tiany ary noho izany dia mikatsaka sy mamorona fiarahana. Ny zavatra sy ny fanaovan-javatra dia masina ary hafa noho ny karazana fitiavana hafa rehetra ka hatrany amin'ny hoe ny fitiavana dia fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavana dia toetra tsy manam-paharoa avy amin'Andriamanitra raha mikatsaka sy mamorona vondrom-piarahamonina amin'ny alàlan'ny fitiavana sy fankasitrahany maimaimpoana izy, tsy misy fiandohana na fitadiavana olona malalany, tsy nosakanan'ny tsy mendrika na ny fanoherana, fa ny mifanohitra amin'izany, noho ny tsy mendrika rehetra. ary handresy ny fanoherana rehetra. Ity endri-javatra manavaka ity dia ahafahantsika mahatsapa ny maha-Andriamanitra ny fitiavan'Andriamanitra. »
Azoko sary an-tsaina fa tsy mitovy amin'ny zavatra niainako ny zavatra niainanao raha vao mikasika ny lalàna sy ny fahasoavana. Toa anao, aleoko manana fifandraisana mipoitra avy amin'ny fitiavana noho ny olona mankatò ny lalàna. Noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany amintsika dia maniry ny hitia sy hahafaly Azy koa isika. Mazava ho azy fa afaka miezaka mankatò azy aho amin'ny fahatsapana adidy, fa aleoko manompo azy ho toy ny fanehoam-pitiavana tena fitiavana.
Rehefa mieritreritra ny fahasoavan'ny fiainana aho dia mampahatsiahy ahy ny hiran'i Billy Joel iray hafa: "Keeping the Faith". Na dia tsy marina aza ny teolojika dia mitondra hafatra lehibe ilay hira: «Raha mijanona ny fahatsiarovana dia mitazona ny finoana aho. Ie, eny, eny, eny Tazomy ny Finoana. Eny mitazona ny finoana aho Eny."